Xidigaha Xulka Galmudug oo afka ciidda u daray dhigooda Hirshabeelle. | Somali National Television - sntv.so
Home CIYAARAHA Xidigaha Xulka Galmudug oo afka ciidda u daray dhigooda Hirshabeelle.
Xidigaha Xulka Galmudug oo afka ciidda u daray dhigooda Hirshabeelle.
Previous articleWasiirka Maaliyadda Galmudug oo tababar u soo xiray howl wadeenno kala duwan+(SAWIRRO).
Next articleWasaaradda Xanaanada Xoolaha oo qabatay kulan looga hadlayay ansixinta sharciga Xanaanada Xoolaha+(SAWIRRO).